Home Home Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo markoo danteesa kagaarey soomaaliya dib ugu dhoofay Muqdisho...
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo markoo danteesa kagaarey soomaaliya dib ugu dhoofay Muqdisho iyo Kheyre oo sii sagooiyay
Waxaa garoonka garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka duushay diyaarada Ethopian Airline ay la socdaan Ra’isul Wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo wafdi wehlinayay.
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa saakay soo gaaray magaalada Muqdisho waxa uuna kulamo saacado badan qaatay la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Madax kale oo dowlada katirsan.
Madaxda labada dhinac ayaa kawada hadlay arimo badan a ugu muhiimsanaayeen xoojinta xiriirka labada wadan , iskaashiga Ammaanka, dhaqaalaha ,la dagaalanka argagixisada, is dhex galka bulshada iyo isku furida socdaalka labada wadan.
Wafdiga Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo goordhaw ka dhoofay magaalada Muqdisho waxaa horey usii sagootiyay Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya.
Booqashadan maanta ku yimid Muqdisho Ra’isul Wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya ayaa noqoneysa tii ugu horeesay uu ku yimaado Soomaaliya, waxa ayna booqashadan qeyb ka tahay socdaalo uu ku tagayay Wadamada dariska la ah Itoobiya.
Previous articleAL -Shabaab Oo manta lagu dilay dagaal ka dhacay Gobolka Baay
Next articleIlaalada RW Kheyre oo isu ekeeysiiyay Ilaalada Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi
Maxaabiis Soomaali ah oo laga daad gureeyay xabsiyada Dalka Liibiya
Dad Rayid ah oo lagu dilay Shabeellaha Hoose